यस्ता रोग भएकाहरुले भुलेर पनि नखानुहोस् दही…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
कार्तिक १४, २०७७ शुक्रबार 5
काठमाडौं : दही हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक चिज हो । भिटामिन र प्रोटिन भरपुर हुने दहीको सेवनले धेरै रोगहरुबाट बच्न सकिन्छ । यसमा भिटामिन–ए, भिटामिन–डी, भिटामिन–बी १२, आइरन, प्रोटिन पाइन्छ । यसमा पाइने प्रशस्त भिटामिन सी पनि पाइन्छ ।
कि’न म’हिलामा नै बढी देखिन्छ था’इराइडको स’मस्या ? क’स्तो छ त कार’ण ! था’इराइड कस्तो रो’ग हो ? हाम्रो श’रीरको था’इराइड ग्लान्ड (घाँटीको अघिल्लो भागमा हुने पु’तली आकारको ग्रन्थी जसलाई था’इराइड ग्रन्थी भनिन्छ) ले थाइरोक्सिन हर्मोन उत्पादन गर्छ । थाइरोक्सि’न हर्मोनले श’रीरको सम्पूर्ण भागका खानालाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने काम गर्छ ।
यो हर्मोनले सामान्य रूपमा काम गरिरहेको अवस्था स्वस्थ अवस्था हो । यो अंगले बढी काम गर्ने या कम काम गर्ने भएमा हर्मोन उत्पादन घटबढी हुन्छ । यसले बढी या कम काम गर्नु नै था’इराइड हुनु हो । था’इराइड कति प्रकारका हुन्छन् ? थाइराइड दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा, हाइफोथाइरोडिज्म (थाइरोक्सिन हर्मोन कम उत्पादन गर्ने) । अर्को, हाइपरथाइरोडिज्म ( थाइरोक्सिन हर्मोन बढी उत्पादन हुने अवस्था)। हा’इपोथाइरोडिज्म कसरी हुन्छ ? थाइराइड ग्रन्थीमा रो’ग लागेमा ग्या’स्ट्राइटिसजस्तै थाइरोडाइटिस हुन्छ ।
जस्तो कि ग्रन्थीमा भाइरस वा किटाणुको संक्रमण भयो भने रो’ग उत्पन्न हुन्छ र हर्मोन उत्पादन गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थालाई थाइरोडाइटिस भनिन्छ । अर्को शब्दमा हाइपोथाइरोडिज्म पनि भनिन्छ । कतिपय अवस्थामा ग्रन्थीले आफै हर्मोन उत्पादन गर्न सक्दैन । यसलाई अटोइम्युनको कारणले हुने हाइपोथाइरोडिज्म हो । हामी कहाँ यही अटोयुमिनको कारणले हुने हाइपोथाइरोडिज्म धेरैलाई छ । धेरैले थाइराइड भयो भनेको पनि यही हो ।
अर्को कुरा, मोटोपना भयो भने शरीरको मागअनुसार हर्मोन पूरा हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा पनि हाइपोथाइरडिज्म हुन्छ । त्यसैगरी ग’र्भावस्थामा पनि यो थाइराइड हुन्छ । गर्भको बच्चाले पनि यो हर्मोन खपत गर्ने हुनाले बढी था’इरोक्सिन हर्मोनको आवश्यकता पर्छ । यस कारण गर्भवती महिलामा थाइराइडको समस्या देखिन्छ । यी दुवै थाइराइड अस्थायी प्रकृतिका हुन् । जुन बच्चा जन्मेपछि र मोटोपना घटेपछि आफै हराउँछ ।
अटोयुमिन तथा थाइराइड ग्रन्थीको संक्रमणले भएका थाइराइड भने स्थायी रूपमा रहन्छन् र यी था’इराइडमा जीवनभर हर्मोनको औषधी लिइरहनु पर्छ । यो थाइराइड भएको मान्छेका हरेक गतिविधि ढिला हुन थाल्छन् । कुनै पनि काममा केन्द्रित हुन नसक्ने, कब्जियत हुने, कमजोरी अनुभव हुने, म’हिनावारीमा र’क्तश्राव बढी हुने, छाला सुक्खा हुने, चिलाउने, कपाल झर्ने, शरीर फुलेर आउनेजस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
था’इराइड महिलालाई बढी किन हुन्छ ? महिलामा थाइराइड बढी हुन्छ । महिलामा बढी देखिने हाइपोथाइराइड हो । तुलना गर्दा थाइराइड भएका पाँच जनामध्ये मध्ये चार जना महिला हुन्छन् । महिनावारी ह’र्मोनको गडबडी महिलामा मात्र हुन्छ । यो हर्मोनमा गडबडी आउनु भनेको थाइराइड भएको हुन सक्छ । थाइराइड पेरोअक्सिड एन्टिबडीको तह पनि महिलामा बढी हुन्छ भनिन्छ । अटोइम्युन रो’ग पनि महिलामा नै बढी देखिन्छ । यस्ता कारणले महिलामा थाइराइड बढी देखिन्छ । थाइराइडको महिलासँग सीधा सम्बन्ध छ ।
एउटा ठूलो प्राकृतिक प्रक्रिया महिनावारी, महिलामा मात्र छ । त्यसमा केही समस्या आउन बित्तिकै थाइराइड हर्मोनको गडबडी छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । महिनावारी गडबडी हुनेबित्तिकै थाइराइड हर्मोन परीक्षण गर्ने चलन पनि त्यसैले भएको हो । थाइराइड भएकाले कुन कुन खाना हुँदैन ? केही खाना खाँदा टिएचस् बढ्ने भएकाले थाइराइड सुन्निएपछि थाइराइड हर्मोन तलमाथि जे पनि हुन सक्छ ।
यस कारण बन्दा, समुद्री खानाहरू खानु हुँदैन भनेर भनिएको हो । तर यी खाना पनि पकाएर खाएपछि ती खानामा हुने तत्वमा हास आउँछ । यसको अर्थ, आयोडिनको प्रभाव भएका खानेकुराहरू खानु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि हो । मुख्य कुरा, कसरी थाइराइड नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने कुरा नै प्रमुख हो ।
थाइराइडबाट कसरी बच्ने ? कुनै पनि प्रकारको था’इराइडको लक्षण देखिएमा समयमै परीक्षण गर्ने, मोटोपना कम गर्ने, योग तथा व्यायाम गर्ने गर्दा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुर्याउँछन् । थाइराइड, हामीले चाहेर हुनबाटै रोक्न भने सकिँदैन । बरु समयमै पहिचान गरेर उचित उपचार गर्न सकेमा समस्या बढ्न पाउँदैन ।
मु’टु र मानसिक रो’गसम्बन्धी औषधी खाइरहेकाहरूमा मानसिक रो’ग हुन सक्छ । यस्ता बिरामीले बेला–बेला थाइराइड परीक्षण गर्नु पर्छ । गर्भवती महिलाले पनि गर्भावस्थामा भएको था’इराइड छ भने पनि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नियमित रूपमा थाइराइडको औषधि खानुपर्छ ।
Prevश्वेता खड्कालाई दशैंमा टिका लगाउँदै आमाले दिइन् बिहे गर्न स्विकृति, स्वेताको आँखामा आयो आँशु…
Nextबाउले खुदो बेचेर पढाएका ६ छोराहरु: दुई भाई सिडियो, ४ भाई हाकिम…हेर्नुहोस् ।
डा. भट्टराई भन्नुहुन्छ : गणत’न्त्रको भात पाक्न ढिलो हुँदा राजत’न्त्रको गो’बर नखाउँ !
झाडापखला निको पार्नेदेखि क्यान्सर लाग्न नदिने अम्बाको पात बहुउपयोगी…हेर्नुहोस ।(प्रयोग गर्ने तरिका सहित)